नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : "शत्रुको नाश होस्" म त्यसो भन्दिन तिहारमा..........!
"शत्रुको नाश होस्" म त्यसो भन्दिन तिहारमा..........!
हाम्रा समस्त मित्रजन, शुभचिन्तक सबैकोमा धनधान्य देबी लक्ष्मीले दिन दुईगुणा रात चौगुणा प्रगती गराइ दिउन । "शत्रुको नाश होस्" म त्यसो भन्दिन, शत्रुको त झन दिन चारगुणा, रात आठ गुणा प्रगती होस्, अर्काको इर्श्या, डाह, रिश गर्ने हरुलाई त्यसो गर्नै नपरोस, कुरा काट्दै अर्काको ढोका चाहर्ने फुर्सद नै नहोस ।
यही शुभकामना ।
* रामप्रसाद खनाल - अध्यक्ष
एबम अन्तराष्ट्रिय कलाकार मँच
* प्रधान सम्पादक - नेपाल मदर डट कम परिवार
Posted by www.Nepalmother.com at 12:34 AM